Umklami wezithombe uPetro (Pyotr) uSoroka ubhekisela eqenjini elinethalente labasha abasha be-fashion fashion yase-Ukraine. Futhi akazwakalise ngokumemezela ukuthi akayena emakethe, kodwa edolobheni laseSumy esifundazweni. Esigodini sesifunda, uPetru wahlela indlu yezemfashini ngaphansi kwegama elithi "Petro Soroka" ("Petro Soroka"). Ibhizinisi likhula ngokuzikhandla. Ngaphezu kwamahhovisi amele e-Ukraine, indlu yefashini "Petro Soroka" nayo inqoba imakethe yaseRussia. Okwamanje, kunamagatsha eMoscow nasemngceleni iKursk, eBelgorod, eRostov-on-Don.
Umklami uPetro Soroka akagxile ekugqokeni "high couture" ephezulu, kodwa ngezingubo ezisebenzayo "pret-a-porter", ongayigqoka ngaphandle kokuhlazeka. Umklami wefashini ucabangela ukuthi izingubo ezimfashini kufanele zifinyeleleke ezindaweni ezibanzi zabantu. Amaqoqo akhe alungele ukuphindaphinda kwe-serial. I-Sumy brand "Petro Soroka" iqhaza emibonweni eminingi. Kuyinto ehlala iqhaza "yezimpawu zokuhweba zezohwebo" - isithangami esikhulu sabaklami befashini eKiev. Iqoqo ngalinye lilungiswa kubathengi, noma iyiphi imodeli ingathengwa ngaphandle kwezinkinga futhi injabulo yokugqoka.
UPyotr Soroka ukholelwa ukuthi kuyimfashini yokugqoka hhayi "izindleko ezinkulu" kuphela. Izifundazwe zenzelwe umqondo wesitayela nokunambitheka, kepha akuzona njalo amathuba okuthola izinto ezifake imfashini. Lokhu kufanele kulungiswe ngokuphuthumayo. Ngakho-ke, ukunamathela kukaPetru edolobheni lakubo kuyaqondakala. U-Soroka uzibheka kuqala koyiklami eyinhloko yeNdlu yamaModeli, futhi kuphela umhleli nomgqugquzeli. Noma kunjalo, ubuciko buseduze naye. Emsebenzini wakhe, umklami wefashini uthembele ebuhleni obuhle besifazane, uzama ukusebenzisa kakhulu izinto zemvelo.
Izingubo ezenziwe ngemfashini zikaPetro Soroka
Ukuhleleka nokuphelela kwemigqa, isitayela esiyingqayizivele kuhlangene nokusebenza, ukubonakala kwemibono yokuthakazelisa nemiklamo ejwayelekile yobuciko - lezi yizambatho ezidalwa nguPeter Sorok kanye neNdlu yezinhlobonhlobo. Umgomo oyinhloko wenkosi ukuguqula noma yikuphi owesifazane ukuba abe yindawo enhle yobuhle nokuvumelana, ukudala uhlaka oluhle lomuntu wesifazane.
Izingubo ezivela kuPetro Soroka zihlukaniswa yizintombi ezithintekayo, imigqa enomusa kanye nekhwalithi engacacile. Akugcini nje ukuhambelana nemfashini yanamuhla, kodwa futhi ilindele izitayela zemfashini zangomuso. Ngenxa yalokhu, izingubo ezibizwa ngokuthi "Petro Soroka" zihlala zifanelekile ezinkathini eziningana.
Umklami uPeter Soroka wasungula iModels House yakhe ngo-2003. Kusukela ngesikhathi sokuqala, isiqondiso esiyinhloko emisebenzini yaso yikuthuthukiswa, ukukhiqizwa, kanye nokugcwaliseka kwezambatho zabesifazane ezihloswe ngabathengi abahlukene: izingubo zansuku zonke zentsha, izingubo ezimele, izingubo ezigcwele, njll.
Ngenxa yezinga eliphakeme lokusebenza, umklamo oyingqayizivele, amanani angabizi futhi eziningi zokugqoka ezivela "Petro Soroka" sezitholile amakhasimende ayo kanye nabalandeli abazinikezele. Indlu yezimodeli yaqinisekisa isimo sayo sebhizinisi elithembisayo, elizinzile, lihlakulela futhi liqinisa izikhundla zalo embonini yemfashini.
Ngonyaka we-2012-2013, amaqoqo okuklanywa wangempela yi: Provence, Bohemia, Black & White, Alien Romance, Wild Orchid, Gardener Beautiful, Flower Paradise, Magnetism, Beaumonde. Abaholi bezokuthengisa baqoqa amaqoqo ezimboni zokugqoka eziwusizo: ama-suits, ama-ponchos, ama-tunics, izingubo, amabhantshi, iziketi.
I-Moscow Fashion Week elandelayo yavula
EMoscow ukuvezwa "Indlela i-fashion ezalwa ngayo: iminyaka engu-100 yokuthatha izithombe"
I-Makario Jimenez ingxenye yamamodeli ku-podium, futhi inengqondo - ihlobo kungekudala!
Ama-reshuffles abasebenzi abasebenza nge-Olympus yase-Italy
Imikhiqizo emibili edumile izolungisa
Iqoqo elisha likaClaudia Schiffer for Tse
Thrush, ukwelashwa kwe-thrush
Indlela Yokuthuthukiswa Kwasekuqaleni YaseMontessori
Ibhalsamu yokutshala indlu
I-Yoga yokulahlekelwa isisindo esisheshayo
Fundisa ingane ukudweba nokudweba
Isaladi yemifino esitokisini esiphundu
Amathiphu: indlela yokukhetha ingubo yomshado
Izinaliti zokubopha zasekhaya ezisekhaya
Isiphi isihlalo semoto sezingane esingcono ukuyikhetha?
Kufanele kube yindandatho yomshado
Ungafunda kanjani ukuyeka abantu?
Simple strawberry pie nge ukhilimu
Pakora nge anyanisi oluhlaza
Umshado Ongalingani Kwasomanje Wanamuhla
Umculi nomlingisi uGrace Jones